C.raxmaan C.shakuur “Soomaalidu waa dad Laba Argagixiso dhexda uga Jira, hadana isku Muuqda” |
C.raxmaan C.shakuur “Soomaalidu waa dad Laba Argagixiso dhexda uga Jira, hadana isku Muuqda”
Maalmihii la soo dhaafay hadal haynta ugu badan ee dunidu waxay ahayd xasuuqii in ka badan 50 ruux oo Muslimiin ah loogu gaystay laba masjid oo magaalada Christchurch ee dalka New Zealand ku yaalla. Waxaan aqriyay inta badan qoraallada looga falceliyey falkaas argagexisinimo. Waxay dad badan oo reer Galbeed ahi qireen in halista ka imaaneysa kooxaha cunsiriyiinta ah ee (sarreynta dadka caddaanka) ah aaminsan ay si wayn u xoogaysatay, kana halis badanyihiin ISIS iyo Alqaacida.
Waxaa arrinka loo tiirinayaa hadallada ka imaanaya (siyaasiinta midigta fog), ee buunbuuniya qaxootiga iyo soogalootiga waddamada Galbeedka. Waxay siyaasiyiintaasi ku andacoodaan in dalkoodii ay soo galooti ka qaadanayaan, dadkoodiina la dhaqan iyo diin rogayo. Islaamka iyo dadka Muslimiinta ah ayey halista ugu badan ka arkaan.
Waxaad mooddaa in falceliska Soomaalidu uusan duco, habaar iyo aflagaado dhaafsiisnayn. Kama muuqanno doodaha, kuma jirno abaabulka, kaalin muuqata kuma dhex lehin Muslinka Yurub iyo Waqooyiga Ameerika.
Ma badna Soomaali lagu martiqaadayo idaacadaha iyo taleefishannada waaweyn, ama wax ku qoraya wargeysyada magaca leh, ama maxfalo kale ka soo muuqanaya, sababtuna waa in aynaan soo saarin dhaqdhaqaayaal (activists) dhaafsiisan xaafadaha Soomaalida iyo Indheergarad gole joogsi leh oo qayb ka ah doodaha dhacaya, saameyna ku leh aragtida dadwaynaha. Kaligeen ayaa isla hadalna, isku muuqanna, isku go’doominay (ghettoes).
Muslimiinta Yurub iyo Waqooyiga Ameerika waxaan la qabnaa halista iyo dhibka ka imaanaya argagexisada cunsiriyiinta ah ee (sarreynta caddaanka) aaminsan, laakiin waxaanu dheernahay argagexisada magac Islaam wadata oo qarax, xasuuq iyo dil ku haysa intii gudaha dalka ku hartay.
Waxaanu nahay ummad labo Argagexiso dhexda kaga jirta. Waxaynu u baahannahay in aan dhabta wajahno, su’aalo adag iska weydiino sababaha aanu halkaa u naalo, aayatiinkeena ummadnimo, iyo sida aan halista labada dhinac kaga badbaadi karno. Caqli, deganaan, xilkasnimo, miyirqab, tabar aqoonsi iyo dood caafimaad oo dhalanteed, ku tiri ku teenka, khuraafaadka, qab been ah, qabyaalada iyo qardajeexa ka maran ayaa nala ka doonayaa.
W/Q. Cabdiraxmaan C.shakuur Warsame